Kuzuzwe ukulawula ngokugcwele kulesi sizukulwane next yokusungula ukuphathwa nokulawula !.
Ngenxa umnikazi yebhizinisi, nawe abhekane nenselele kokuncintisana omkhulu embonini. Kangakanani kangcono sanelise ikhasimende? Indlela aphathe ibhizinisi lakho kalula? Indlela bathathe isinqumo esingcono? Kwesiyingi ukukhathazeka mkhulu. Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control bahlongoza solution wena ezingasiza kuthathe le nselele.
Ungakwazi ukonga isikhathi kanye nemali by kokuthenga Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi buyisela nesikhathi manual usithathela imisebenzi by ezishintshayo nge Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi hlolisisa umsebenzi yebhizinisi lakho by izibalo imibiko eziningiliziwe lokhu Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi ukwakha izinqumo zebhizinisi lakho on real-time ukwaziswa okunembile ohlinzeka by Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi ukuphatha amadivaysi kahle amaningi hardware like ithikithi ephrinta, cash ekhabetheni, line display (pole), screen touch, ibhakhodi umfundi (bar code Enani) ngokubeka up Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi uyawasebenzisa zesimiso ebalulekile nge front and back amahhovisi of Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi okukhokhwa ngokuqinile nesipiliyoni kwamakhasimende ahambise service kangcono ngokusebenzisa Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi ahlukanisa imisebenzi yezisebenzi zakho ukuze kuncishiswe ukukhwabanisa ngokusebenzisa ukuphepha kwemigomo Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi ushiye hotel wakho ukusebenza ngaphansi kokulawula nge Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
Ungakwazi ubuwena design okungabizi of Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control solution yebhizinisi.
English , Afrikaans , Albania , Arabic , Armenian , Azerbaijani , IsiBasque , Belarusian , Bengali , Zulu , IsiBulgaria , Catalan , Cebuano , IsiShayina (Esenziwe lula) , IsiShayina (Traditional) , IsiCroatia , Czech , Danish , Dutch , Esperanto , Estonia , IsiFilipino , Finnish , French , Galician , IsiGeorgia , German , Greek , Gujarati , Creole angamaHaiti , Hausa , Hebrew , Hindi , Hmong , IsiHungary , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , Latvian , Lithuanian , Macedonian , Malay , Maltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , Norwegian , Persian , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu